Waalida Daahir-cawir: Buufis Xil-sheegasho iyo Qabiil-sheegasho. Qeybtii 1-aad | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
Dadka yaqaana Daahir-cawir waxay 100% rumeysan yihiin inuu noqday Shaqsi Fashilmay, Ceebaysan, Duliyeysan, maskax dhiman noqday.
Waana hubaal haddii uu qofka xishood iyo dareen dadnimo lahayn inay ka suurtowdo inuu ku dhaqaaqo Fal kasta, isla markaana uu Af-dheeridiisa aysan ka nabad-gelin Ummaddaha kale.
Tan iyo markii yimid dalka Holland waxa uu la soo baxay Dabeecad liidata, balse uu isagu u arko Ilbaxnimo uu dadku dheer yahay, waana Dhaqan Aadmi, illayn qof kasta qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira.
Qof kasta oo yaqaana Daahir-cawir waxay is-weydiiyaan Buufiska nooca daran ee madax martay, haddii aad arki jirtey qof aad u jecel inuu Taliye noqdo, ama Shaqsi kale oo Hawo Adduun hayso iyo kuwo kale oo ka fekerayo Buufis Tahriib, waxa uu Daahir-cawir qabaa Buufis nooc kale.
Buufis Mooryaanimo, Dilaanimo, Jaajuusnimo, Hawl Sir-ururin la hayb ah kuwa Walaan ee Bacaha Jaadka ka eegeegta wax aan loo jeedin ayuu ku soo nolol-qaatay, wuxuuna Been-abuurka ku yahay Khabiir duufsan kara dadka Indho-ku-garaadlayaasha ah.
Xilligii Dagaalladda Sokeeye, waxa uu iska ahaa Moryaan Isbaariste qori AK caagle la yurura Dhufeysyadda, haddana waxa uu iska dhigayaa Aqoonyahanka ugu garaadsan Calaamka oo ka sarreeya dadka kale.
Saaxiibadda yaqaana ayaa hadal-haya in dhibka uu Daahir-cawir haatan ku hayo Mujtamaca inuu ka mas’uul yahay Shaqsiga Dhaqncelin ahaanta ugu sameeyey Websaytka Waagacusub.com.
Xaqiiq ahaan inkastoo aan magaca Shaqsigaasi xusi Karin ayaa waxaa hubaal ah inuu Shaqsigaasi ka naxay Mooryaanimadda iyo Dilaanimadda Daahir-cawir, waxaana laga yaabaa inuu uga dan lahaa inay Saxaafadda u noqoto Hawl lagu dhaqangeliyo ama uu ka lahaa arrin dahsoon iyo inay dadka ka nabad-galaan Shartii Daahir-cawir.
Dhaqan-celintii loogu sameeyey Websaytka Waagacusub.com waxa uu ka dhaxlay Dhaqan-xumo dheeraad ah iyo inuu dadka ku aflagaadeeyo, ku handado, kuna isbaaraysto Lacago Baad ah.
Daahirkii Moryaanka iyo Dad-afduubaha ahaa waxa uu haatan iska sheegtaa inuu yahay Saxafi Baare ah (Investigate Journalist).
Waxay arrintaasi qeyb ka tahay Nolosha Dhalanteedka ee uu Noloshiisa ku marin-habaabinayo, waa laga wada dheregsan yahay Sooyaalkiisa Nololeed iyo Xirfadda Mooryaanimo ee uu ku caanka ahaa.
Arrimaha Buufiska ee uu Waalida maalmeed u horseedaysayaa waxaa kaloo ka mid ah Buufiska Nacaybka ee uu ka qaaday Qabiilka uu ka soo jeedo ee Galgala.
Buufiska kale ee uu la daalo-dhacayo ee uu sida Weji Kaakinimadda ugu halqabsanayo ayaa ah Qabaa’illadda uu iska sheegto, iyadoo la og yahay halka uu ka soo jeedo.
Waxaa kaloo uu Buufis-waaliyeed ka qaaday inuu iska sheegto waxaan ka tirsanahay oo aan la shaqeeya Sirdoonka Netherland, FBI-da, INTERPOL, Kooxda Baarayaasha QM ee xayiraadda saaran Somalia iyo Eritrea iyo sheegasho kale ilaa A up to Z xiriirsan.
Sheegashadda Kooxda Baarayaasha ayaana ah qoddobka uu ku handado Shirkadaha, GaNacsatada, Siyaasiyiinta iyo dadka caadiga, waxaana arrintaasi uu u yeeshay Wakiil u jooga magaalladda Muqdisho oo inta uu wax u soo dhega-dhegeeyo u soo gudbiya, si Warar Been Abuur iyo Dacaayad loogu qoro dad la doonayo in laga tuujiyo lacago baad ah, iyadoo loogu booteynayo waxaa Warbixintaada u gudbinayaa Kooxda Baarayaasha QM, waana soo daabici doonaa inaad Shaqo noocaas ku jirto oo aad taageerto Argagixiso.
Buufiska Daahir-cawir uu la qafiifay kow iyo labo ma aha, waxaana ayaan-xumo inuu Magaca Hay’addo Caalami adeegsado si uu Ummadda u aflagaadeeyo uguna hanjabo.
La Soco Qeyb kale.
Previous: Muwaadiniinta Maraykanka oo looga digay inay booqdaan Kenya iyo weeraro ay Alshabaab geystaan.
Next: Dakhliga ay Ciiddanka Kenya ka helaan Sonkorta Suuqa madow lagu geliyo Kenya oo la shaaciyey.